Khabar Kantipur » आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको: सबैलाई शुभकामना !
आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको: सबैलाई शुभकामना !
मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिनाको मध्य अर्थात् असार १५ गतेका दिन आज नेपालभर धान दिवस, मनाइँदैछ । नेपालले २०६२ सालदेखि असार १५ लाई धान दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
कृषि विभाग अन्तर्गत गठित सोह्रौ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, मूल आयोजक समितिले बर्दियामा धान दिवसको विशेष कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । यस बर्ष धान दिवसको नारा ‘धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चाम आयातमा न्यूनीकरण’ तय गरिएको छ ।
आजको दिन किसानले शक्ति प्राप्तिका लागि दही च्यूरा खाने गर्दछन् । यसबेला दही च्यूराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ । असार १५ लाई नेपाली समाजमा दही च्यूरा खाने पर्वको रुपमा पनि लिइन्छ । खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही च्यूरा खाई असार १५ मनाउने गर्दछन् ।
यो पनि पढ्नुस : नेपालमा विश्वले अद्भूत मान्ने धरोहरु, प्राकृतीक केन्द्र र धार्मिक धरोहर रहेका छन् । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालीका ४ चुरेको फेदीमै रहेको शिवलिङ्गेश्वर (लिङ्गा) क्षेत्र यही अद्भूत मध्येको एक हो ।